Masjidka Towfiiq Caasimadda Norway Oslo oo heshiis laga gaaray – Somali Mail
Home WARARKA Somali News Masjidka Towfiiq Caasimadda Norway Oslo oo heshiis laga gaaray
Masjidka Towfiiq Caasimadda Norway Oslo oo heshiis laga gaaray
Sida uu bartiisa Facebook ku soo qoray shiikh Maxamed Idiris oo sidhow ula socday xaalada masjid hoos ka akhriso qoraalk shiikha
Bishaaro asxaabey, waxaan filayaa inaad baraha bulshada bilihii lasoo dhaafay ku aragteen muran xoogaa ka jirey, Masjidkeenna weyn Masjid Tawfiiq ee caasimadda Norway Oslo.
Qofba si uga hadal qof xog ka haya iyo mid aan ka hayn, hayeeshee si dhaw ayaan ula socdey is af garanwaaga ka jirey, oo culimo iyo wax garad badani ku hawlanaayeen. Aniga si gaar ah ayuu qalbiga iigaga yaal Masjidkaasu waxaanan ku tirsadaa mashruucyada ugu fiican ee aan Ilaahay ugu dhowaado kicinteeda iyo dhismeheeda, laga soo bilaabo 2001. Muddo 20 sano ka hor.
Alxamdulilahi waxaan idiin ku bishaaraynayaa in lagu guulaystey xallinta khilaafkii jirey, saacadaha soo socdana la soo afjari doono inshallahu, beryahanba kulamo dhaadheer oo ka socdey Masjid Abubakr ee Drammen, oo ay garwadeen ka ahaayeen midowga maraakista soomaalida ee Norway, Ilaahay mahadiis oo guul ku dhamaatay.
Waxaan Ilaahay uga baryeynaa walaalaha Masjid Tawfiiq, iyo Masaajidda kale ee Norway, gaar ahaan Masjidka Drammen iyo odayaashiisa, in Ilaahay khayrka waafajiyo, dadaalkana ajar iyo xasanaad ka siiyo, wax muslimka oo dhammi ku farxana Ilaahay ku toosiyo, waa maalin jimce, ee dhammaan hal mar aan faataxada u marno.
Previous article UNICEF oo shaacisay Liiska caruurta dhashay habeenki 2020 ga
Next article Maraykan oo dilay sargaal ka tirsan IRAN faahfaahin